Madaxweynaha oo ku baaqay inaan laga daba imaan shabaabka laqabto. – Radio Daljir
Madaxweynaha oo ku baaqay inaan laga daba imaan shabaabka laqabto.
Agoosto 14, 2016 10:22 g 0
Muqdisho, Aug 15 2016–Madaxweynaha Jamhuuriyada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka digay in laga daba yimaado xubnaha ka tirsan Shabaab ee ay ciidanka dowladda soo qabtaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay marka ciidanka dowladda ay soo qabtaan xubnaha ka tirsan Shabaab in ay ka daba yimaadaan Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo Ganacsato iyagoo ku doodaya in aysan wax dambi ah aysan laheyn Shabaabka ciidanka dowladda ay soo qabtaan.
Madaxweynaha Puntland oo u safraya wadanka Itoobiya.